आत्महत्या गर्न हिँडेकी राधाको ‘विद्रोह गाथा’ राधा पौडेलले ७ वर्षकी हुँदा आमाको शरीरबाट अनवरत रगत बगेको देखिन् । सोधिन्, ‘के भयो आमा ?’ आमाले भनिन्, ‘पछि तैंले पनि यस्तै भोग्नुपर्छ ।’ आमाको जवाफले राधा स्तब्ध भइन् । Share
पूर्वको ‘भक्का’ काठमाडौंमा Share
मिस्टर कर्नः मकैको मःमः र चाउमिन ! बफ, भेज, चिकेन र मटन मःमः तथा चाउमिनबारे त धेरैलाई थाहा छ । तर, काठमाडौंमा एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ, जहाँ मकैको मःमः तथा चाउमिन पाइन्छ । जहाँ हरेक दिन खाजा खान जानेको भीड लाग्छ । Share
रौतहटको ‘कटिया’ काठमाडौंमा फेमस रौतहट पुगेका जोकोहीलाई कटियाले लोभ्याउँछ । तर, अब कटियाका पारखीलाई रौतहट पुग्नु पर्दैन । काठमाडौंमै कटियाको स्वाद चाख्न पाइन्छ, कालिकास्थान चोकस्थित कटिया हाउसमा । Share
१० मा पढ्दा जेल, जेलबाटै स्नातकोत्तर सुन्धाराका कैदीबन्दीका नजरमा मेरिनाको जीवन काँडेतार भित्र फक्रिएको सून्दर फूल हो । उनी अहिले जेलमा हेडमास्टको भूमिकामा जेलका २ सय भन्दा वढी वालवालिका र महिलालाई शिक्षा दिइरहेकी छिन् Share
बिर्सती मेलाः उस्तै रौनक, चुस्त इतिहास यो दिन बाठपाला मन्दिर दैपाडाबाट बाल्यचौर हुँदै महालिङ्ग देवताको मन्दिर च्यागोटसम्म ढाका बजाउँदै ‘च्वच्व’ भन्दै नाङ्गो खुट्टाले पदयात्रा गर्ने प्रचलन छ Share
किन ऋषिपञ्चमीमा कर्कलो खाइन्छ ? कर्कलोमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ । सँगै क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी, के लगायत शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व पाइन्छ । Share
‘जिन्दगीसँग गुनासो गर्ने फुर्सद नै छैन’ चिकित्सकहरुलाई ‘धरतीका भगवान’को रुपमा चित्रित गरिन्छ । भगवानले एकपटक जीवन दिएका हुन्छन् । यसरी भगवानले एक पटकको लागि दिएको जीवन चिकित्सकले बारम्बार बचाउँछन् Share
टेम्पो नम्बर २२६ कहाँ थिए र अहिलेको जस्तो फराकिलो र पिच गरिएका सडक ? कयौ मोडहरुमा सयौ अफ्ठ्याराहरु छलेर जोगाउँदा पनि चालक नै उछिट्याउन सक्ने खाल्टा र अफ्ठ्यारा थिए । हिम्मत नहारी होशियार भएर मैलै त्यसलाई खेपे । अर्थात ती सडक र मान्छेसँग जुधे । Share
मांसपेशी बाउँडिने समस्याबाट जाेगिन के खाने ? मैदानमा कुदिरहेको खेलाडी एक्कासी पिँडुला वा तिघ्रा समातेर चिच्याउँदै लडेको हामिले धेरै देख्ने गरेका छौं । हातखुट्टा बाउँडिनु रोग होइन, त्यसैले सटिक उपचार हुँदैन । तर ठूलो समस्या हो Share
शताब्दी पुरानो संस्कृतिले भरिपूर्ण सुर्मा भवानी जात्रा दोचा नचिप्लिने र पाउला चिप्लने हुनाले निजेरीले सुर्मालाई भेट्टाउन सकिनन् र हालको सुर्मा सरोवर ताल बनाई भागबन्डा गरेपछि मात्र निजेरी पुगिन् । सुर्मा सरोवरको एउटै तालमा स्पष्ट दुई रंग छन् । नीलो रंग सुर्माको भाग र कालो रंग निजेरी भाग अहिले पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यसरी सुर्माको यो उच्च हिमाली तालमा बसाइँ सरेको थियो भन्ने भनाइ छ । Share
रंगमञ्चको रापमा पाकेका पृथक् अभिनेता रंगमञ्चको भोक निरन्तर लागिरह्यो उनलाई । गुरुकुल भत्कियो । सुनिल पोखरेल नाटकबाट टाढिए । अनुप बराल आफ्नै एक्टर्स स्टुडियो स्थापनातिर लागे Share
आँखा छैन भाका छ, न कोही दाता छ समाजमा अपाङता भएकालाई चिन्ने कमै हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक ठाउँहरुमा अपाङगता भएका व्यक्तिलाई केहीले सहानुभूति देखाउने गरे पनि धेरैले महत्व दिन खोज्दैनन् Share
मानसिक तनावका पनि फाइदा ! गुड स्ट्रेसलाई व्यक्तिकाम लागि राम्रो मानिन्छ किनकि यसले शारीरिक रुपमा मात्रै होइन मानसिक रुपमा पनि फाइदाजनक हुन्छ । Share
गर्भवती महिलालाई मेहन्दी खतरा ! मेहन्दीमा प्रयोग भएका केमिकलले गर्भको बच्चालाई असर गर्ने र गर्भ तुहिन सक्ने भएकाले सकेसम्म गर्भवतीले कपाल वा हातमा मेहन्दी नलगाउँदा उत्तम हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछिन् । Share
तपाईंको ओछ्यान कस्तो छ ? यस्ता छन् दर्जन ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकार ग्रेग जेनरका अनुसार ओछ्यानको अस्तित्वको सबैभन्दा पहिलो प्रमाण ७७ हजार वर्षअघि पाषाणकालमा पाइएको छ Share
साहसी मदिबा अर्थात् नेल्सन मन्डेला कन्सलट्यान्सी कम्पनीमा जोडिएका मन्डेलाले त्यहाँ रंगभेदको चरम रुप भोगे । अश्वेत भएकै कारण कन्सलट्यान्सी कम्पनीमा उनकf लागि चियाको छुट्टै कप नै राखियो Share
*गंगा वरदानसँग गाँजा संवाद तपाईंलाई गफ दियो बुढाले भन्ने लाग्ला । तर सुन्नुस्, म गाँजा र सेक्समध्ये रोज भन्दा गाँजा रोज्ने मान्छे हुँ । उमेरमा पनि म सेक्स धेरै गर्दिन थिएँ । Share
गाँजा र बब मार्लीले थिचिएका गंगा वरदान फुलेको दाह्री । लट्टा परेको कपाल । चाउरिएका गाला । चिम्सा आँखा । पातलो ज्यान । झट्टा हेर्दा ठ्याक्कै बब मार्ली (विश्वचर्चित जमैकन गायक) । यही नै गंगा बर्दानको देखिने व्यक्तित्व । Share